LABADAN Arrimood Ayay Xiddigaha Man United Ka Aaminsan Yihiin Paul Pogba Iyaga Ayaana Ku Qasbi Kara Inuu Ku Biiro Real Madrid Ama Juventus. - Gool24.Net
LABADAN Arrimood Ayay Xiddigaha Man United Ka Aaminsan Yihiin Paul Pogba Iyaga Ayaana Ku Qasbi Kara Inuu Ku Biiro Real Madrid Ama Juventus.
Khadka dhexe ee kooxda Manchester United ee Paul Pogba ayaa doonaya inuu suuqa xagaagan u wareego midkood kooxaha Real Madrid iyo Juventus saddex sano kaddib markii uu 105 euro kusoo gaadhay Old Trafford.
Pogba ayaa bishii hore gil-gilay suuqa kala iibsiga isaga oo sheegay hadal cadaan ah oo ahaa inuu doonayo bilaabista tartan cusub oo ka duwan midka uu ku haysto Man United.
Dhinaca kale wakiilkiisa Mino Raiola ayuu dhawaan kasoo yeedhay hadal aan gabasho lahayn oo shakiga ka saaray waxkasta kaas oo sheegay in min tababaraha kooxda ilaa mulkiiluhu ay og yihiin rabitaanka Pogba ee ah inuu baxo.
Haddaba, Haddii ay sidaas tahay maxay xiddigaha Pogba uu kala tirsan yahay Man United ka aaminsan yihiin 26 jirkan iyo habdhaqankiisa miyayse iyagu u arkaan udub dhaxaad kooxdoodu u jabayso haddii uu ka tago.
Wargeyska ESPN ayaa sheegaya in Pogba uusan wada haysan xiisaha iyo jacaylka xiddigaha uu kooxdaas kala tirsan yahay waxaana ay shaki galinayaan labada arrimood ee kala ah baahidiisa iyo awoodiisa.
Warbixinta ayaa sheegaysa in badh kamida xiddigaha Man United ay qabaan in Pogba uusan lahayn baahida guuleed ee uu kooxda kor ugu qaadi karo kaalmaha sarre ee Premier League.
Si lamida xiddigo kale ayaa shaki galinaya awoodiisa iyo haddii uu awood buuxda u leeyahay inuu isku muujiyo si muuqata.
Marka laga yimaado aragtida ESPN, Pogba ayaa loo arkaa shaqsi saamayn ku leh Red Devils iyo qolkooda labiska balse waxa qasab ah inuu dhaq-dhaqaaqiisu yaraanayo haddiiba ay ka go’antahay inuu u wareego kooxaha doonaya.
Si kastaba ha ahaatee, Labadaas qoddob ee ah waxa ay xiddigaha Manchester ka qabaan Paul Pogba ayaa haddiiba ay xaqiiqo buuxda yihiin ku riixi doona u wareegista Juventus iyo Real Madrid midkood.